Ihe 4 ị kwesiri inwe na ọdịnaya ọ bụla | Martech Zone
Otu n'ime ụmụ akwụkwọ anyị nke na-eme nyocha ma na-ede nyocha mbụ maka anyị na-ajụ ma m nwere echiche ọ bụla gbasara otu esi agbasa nyocha ahụ iji hụ na ọdịnaya ahụ dị mma ma sie ike. Maka ọnwa gara aga, anyị na-eme nyocha Amy Woodall n'omume ndị ọbịa na-enyere aka na ajụjụ a.
Amy bụ aka ochie ahịa ịzu na ọkà okwu ihu ọha. Ọ na - arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị otu egwuregwu n’enyere ha aka ịmata ihe ebumnuche na mkpali nke ndị ọchụnta ahịa nwere ike ịmata ma jiri mee ka mkpebi ịzụta gaa n’ihu. Otu n’ime mmejọ anyị na-emekarị site na ọdịnaya anyị bụ na ọ na-egosipụta onye dere ọdịnaya kama ịgwa onye zụrụ ya okwu.
Ihe 4 na-akpali ndị na-ege gị ntị
arụmọrụ - Kedu ka nke a ga-esi mee ka ọrụ m ma ọ bụ ndụ m dị mfe?
Mmetụta - Kedu ka nke a ga-esi mee ka ọrụ m ma ọ bụ ndụ m nwee ọ happụ?
Trust - Whonye na-akwado nke a, na-eji nke a, na gịnị kpatara ha ji dị mkpa ma ọ bụ nwee mmetụta?
Facts - Kedu nyocha ma ọ bụ nsonaazụ sitere na isi mmalite ndị na-akwado ya?
Edere nke a site na mkpa, ndị na - agụ akwụkwọ gị adabaghị n'otu ihe ma ọ bụ ọzọ. Ihe niile dị oke mkpa maka ibe ọdịnaya ziri ezi. Can nwere ike dee na etiti gbadoro anya na otu ma ọ bụ abụọ, mana ha niile dị mkpa. N'agbanyeghị ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ aha ọrụ gị, a na-enwe mmetụta dị iche iche nke ndị ọbịa na-adabere n'ụdị ha.
Dabere na eMarketer, ụzọ kachasị dị irè B2B ahịa ahịa bụ ihe omume nke mmadụ (nke 69% nke ndị na-ere ahịa kwuru), webinars / webcasts (64%), vidiyo (60%), na blọọgụ (60%). Ka ị na-egwu ala karịa na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, ihe ị kwesịrị ịhụ bụ na atụmatụ ndị kachasị dị irè bụ ebe ebe ihe 4 niile nwere ike iji ya rụọ ọrụ.
Na nzukọ nke mmadụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmata ihe ndị na-ege ntị ma ọ bụ atụmanya na-elekwasị anya ma nye ha. Ha nwere ike ịdị na ụdị ọrụ ndị ọzọ ị na-efe. Maka ụlọ ọrụ anyị, dịka ọmụmaatụ, atụmanya ụfọdụ na-ahụ na anyị ejirila ụdị isi dị ka GoDaddy ma ọ bụ Ndepụta Angie na nke ahụ na-enyere anyị aka ịmaba n'ime njikọ ahụ. Maka atụmanya ndị ọzọ, ha chọrọ ọmụmụ ihe na eziokwu iji kwado mkpebi ịzụta ha. Ọ bụrụ na anyị na-eguzo n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị mma n'ihu ha.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nke a bụ ahịa na-eto eto. Companlọ ọrụ dị ka ndị ahịa anyị FatStax nye ngwa ngwanrọ nke data na-agba na ama ma ọ bụ mbadamba nkume nke na-etinye ọdịnaya ahịa gị niile, nkwekọrịta ahịa, ma ọ bụ data dị mgbagwoju anya ịchọrọ ịkekọrịta n'ọbụ aka gị (na-anọghị n'ịntanetị) iji nye atụmanya gị n'oge ha chọrọ ya. Ghara ikwu banyere ihe omume nwere ike ịdekọ site na njikọta ndị ọzọ.
N'ime mpempe akwụkwọ dị iche iche, dị ka ihe ngosi, edemede, infographic, akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ọbụlagodi ihe ọmụmụ, ị nweghị okomoko nke ịkọ na ịchọpụta mkpali ndị na-enyere aka ịgbanwe ndị na-agụ gị. Ndị na - agụ akwụkwọ anaghị agbali otu ihe ọ bụla - ha chọrọ nghazi ozi n'ofe ihe anọ iji nyere aka kpalie ha itinye aka.
Tags: ọdịnaya gbara ọkpụrụkpụcontent Marketingakakabaredearụmọrụọchammetụta ucheeziokwufatstaxtụkwasị obiWritingederede ederede